Hlola iBermuda - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eBermuda.
Ukuthi udlani futhi uphuze eBermuda
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeBermuda
Bukela ividiyo ngeBermuda
IBermuda iyindawo elawula izwe laseBrithani eyengaphesheya kolwandle i-Atlantic Ocean enyakatho ne- I-Caribbean, ogwini lwaseNyakatho Melika empumalanga yeSouth Carolina. Hlola iBermuda, enye yezinsalela zokugcina zombuso wamakoloni waseBrithani owawukhulukazi eNyakatho Melika.
IHamilton - inhloko-dolobha nokuphela kwedolobha.
George - inhlokodolobha endala. Idolobhana elidala kakhulu elisindayo lesiNgisi.
IFlatts Village - indawo eseBermuda Aquarium, iMuseum kanye neZoo.
ISomerset Village - eSomerset Island, eSandy's Parish.
IHoureshoe Bay Ibhishi
IHamilton, ePembroke Parish, iyisikhungo sokuphatha saseBermuda nedolobha elikhulu kunawo wonke. Inenqwaba yeminyuziyamu, ezinye izakhiwo ezinhle nezakhiwo. Inesonto elihle laseSheshi likaZiqu-zintathu Ongcwele. Kunezindawo eziningi ezinqabile, izinqola nezinsimbi zamagugu eRoyal Naval Heritage. Kunama-cinema, izitolo ezahlukahlukene, imigoqo, amahhotela nezindawo zokudlela. Idolobha libusiswe nangezimakethe, izingadi, izitebele zamabhishi, amabhishi, amabala kanye nezindawo ezinamaplaza anemigwaqo ebanzi, ama-boulevards kanye nezindlela ezihamba ngezinyawo.
Okuhehayo okuphawulayo kufaka phakathi;
I-Anglican Cathedral of the Holy Holy Trinity
IBarr's Bay Park
Imakethe yabalimi baseBermuda
I-Bermuda Historical Society Museum
IBermuda National Gallery
IBermuda National Library
Isakhiwo seKhabhinethi neCenotaph
Isonto lesonto laseSt. Theresa
I-Royal Bermuda Yacht Club
IBermuda iqukethe iziqhingi neziqhingi cishe ze-138, nazo zonke iziqhingi ezinkulu eziqondiswe kugobolondo elakhiwe njengotshani, kodwa cishe empumalanga-nentshonalanga, izembe futhi lixhumeke ndawonye ngamabhuloho omgwaqo. Ngaphandle kwalokhu kubenzima, amaBermudians ajwayele ukubiza iBermuda ngokuthi “isiqhingi”. Ngokwesimo sendawo, iziqhingi zakhiwa ngamagquma aphansi ahlukaniswe ukudilizwa okuvundile, futhi kwagxilwa nesethi yemigwaqo eyinkimbinkimbi.
Iqoqo lesiqhingi elakhiwe empeleni lingumkhakha oseningizimu we-pseudo-atoll eyindilinga, izinsalela zamakhonkolo ezifakwa ngaphansi kwezixhobo ezifakwa ngaphansi komhlaba noma ezifuyweni zangaphakathi (iBermuda yakhiwa ngentaba-mlilo kodwa ayisiyona indawo yangempela). Ngenxa yalokho izindawo ezisogwini ezisenyakatho zeziqhingi ezakhiwe zihlala kancane, kanti izindawo eziseningizimu zivezwa ukugcwala kolwandle. Ngenxa yalokho iningi lamabhishi amahle kakhulu asogwini oluseningizimu.
IBermuda inesimo sezulu esishisayo, nesimo sezulu esishisayo nesinomswakama kusuka entwasahlobo ngokuwa.
IBermuda yaqala ukuhlaliswa e-1609 ngabakoloni abangamaNgisi ababephethwe umkhumbi belibhekisa koloni lwesiNgisi lwabantwana eVirginia. Umkhakha wokuqala kulezi ziqhingi kwakuwukulinywa kwezithelo nemifino ukunikezela amakoloni aseMelika okuqala.
Ukuvakashela izivakashi eBermuda ukuphunyuka ebusika eNyakatho Melika kuqala ukwenziwa ezikhathini zeVictorian. Ezokuvakasha ziyaqhubeka nokubaluleka emnothweni wakulesi siqhingi, yize amabhizinisi aphesheya eye wadlula kuwo eminyakeni edlule, okwenza iBermuda yaba isikhungo sezimali esiphumelela kakhulu sokophesheya.
Ungafika ngendiza usebenzisa iBermuda LF Wade International Airport.
Isikhumulo sezindiza sisedolobheni iSt George's Parish, eduze kweCorton Harbour, kanye ne-St George's eduzane kuneHamilton (yize kungekho ngxenye yeBermuda ekude kunenye).
IBermuda ithola ukuhanjelwa okuningi kusuka emikhunjini ehamba ngesikebhe ezinyangeni zasehlobo.
IBermuda iyintandokazi, uma inselele yokuya kubantu abangasogwini lolwandle. Ukunqamula usuka ezweni lase-US noma e-Azores kungathatha amasonto angaba ngu-3 ezolile ehlobo. Ukuphela konyaka kungahle kube nomoya omningi kakhulu: i-nor'easters kuya izivunguvungu. Enye ingozi: Imfucumfucu eminingi ezintantayo evela emikhunjini eshiswe yilanga kanye nezivunguvungu zeminyaka embalwa edlule. Kungakapheli imisebe ye-200 engaba yimitha evela eBermuda eshayisana nezinto eziqinile ihlala ihlala futhi ibulala.
Iziqhingi ziyahlomula ngokusebenza kwebhasi okuhle kakhulu nokuvama, okuxhumanisa zonke izingxenye zeziqhingi neHamilton. Amabhasi anomoya futhi asetshenziswa ngokulinganayo ngabahlali bendawo, izivakashi nabagibeli bezikebhe.
Kuze kufike ukufika kwamasosha ase-US ngesikhathi sempi yezwe yesibili, izimoto bezivinjelwe ngokuphelele kulezi ziqhingi. Ngisho namanje, izimoto eziqashiwe (izimoto eziqashisayo) zivinjelwe futhi izakhamuzi ezivunyelwe kuphela ukuba nezimoto - zinqunyelwe eyodwa ngasekhaya! Amabhayisekili noma izimoto ezihamba ngomshini zitholakala ngokuqashwa futhi ezisetshenziswa kakhulu ngabantu bendawo nezivakashi ngokufanayo. Kuya ngokuthi uhlala kuphi, i-moped ingaba yindlela yakho enhle yokujikeleza. Uma ufisa ukusebenzisa i-mopeds, ukuqasha kuvame kakhulu, kulawulwa futhi kunentengo ngokuncintisana.
Ukuhamba kungakwesobunxele bomgwaqo. Izimpawu zomgwaqo zisuselwa kulokho okusetshenziswa e-United Kingdom; nokho, iningi lisemakhilomitha. Umkhawulo wejubane likazwelonke yi-35km / h, ephansi ezindaweni ezakhiwe nezinye izindawo ezihlanganisiwe.
IBermuda inezifundo eziningi zegalofu futhi amabanga okushayela asatshalaliswa kanye nobude bawo.
IGeorge Golf Course, eSt George Parish, enyakatho neDolobha laseSt George.
Tuckers Point Golf Course / Mid Ocean Golf Course, eSt George Parish, eduzane naseTucker's Town.
I-Ocean View Golf Course, ePheronshire Parish ogwini olusenyakatho.
I-Horizons Golf Course, iPage Parish eningizimu-ntshonalanga. (Izimbobo ze-9)
Belmont Hills Course Course, eWarwick Parish empumalanga.
IRiddell's Bay Golf neLive Club, eWarwick Parish entshonalanga.
Fairmont Southampton Princess Golf Course, eSouthampton Parish empumalanga.
IPort Royal Golf Course, eSouthampton Parish entshonalanga.
IBermuda Golf Academy neDriving Range, iSouthampton Parish entshonalanga.
I-Bermuda inezibonelo eziningi zezinqola ezinkulu namabhethri amancane asakazeka esiqhingini esakhiwe phakathi kwe-1612 ngemuva kokuhlala okokuqala futhi aqondiswa kuze kube yi-1957. Ngokwesilinganiso sawo esincane isiqhingi sakhiwe cishe i-100 izinqaba ezakhiwe. Amaningi abuyiselwe, ikakhulukazi amakhulu, futhi avulekele umphakathi ngama-diorama nemibukiso. Abaningi baneziteshi zabo zangempela endaweni. Abanye baqamba amanga eziqhingini naseziqhingini ezingaphandle futhi bangatholwa ngesikebhe kuphela, noma bahlanganiswe ezindaweni zangasese nezindawo zokungcebeleka. Ezinye zalezo ezingatholwa yilezi:
IFort St. Catherine, iSt George Parish enyakatho (inezibonisi nama-diorama nezithombe ezingamaCrown Jewels)
IGates Fort, iSt George Parish empumalanga (ukungena kwesiteshi sokugada i-Town Cut)
I-Alexandra Battery, iSt George Parish empumalanga
IFort George, iSt George Parish (ebheke iDolobha laseSt George)
Ibhethri likaDavid, iSt George Parish empumalanga
IMartello tower / iFerry Island Fort, iSt George Parish entshonalanga (eFerry Reach)
ISilo samaKhosi / iDelonshire Redoubt / iLandward Fort, iSt George Parish eningizimu (esiQhingini saseCastle, sitholakala ngesikebhe)
IFort Hamilton, iPembroke Parish (ebheke eDolobheni laseHamilton)
I-Whale Bay Battery, eSouthampton Parish entshonalanga.
IFort Scaur, iSandys Parish (ebuka amanzi oMsindo Omkhulu)
The Gcina eDockyard, eSandys Parish (ngaphakathi kweMaritime Museum)
I-Royal Naval Dockyard
Itholakala eHamilton, le paki yomphakathi yikhaya lamakhonsathi amaningi ezinyangeni zasehlobo ku-bandstand, eyasungulwa ku-1899 futhi yabuyiselwa ngokuphelele kwi-2008. Vakashela enye yezingadi zezimbali eziningana, uhambe ngezindlela noma uhlale kwelinye lamabhentshi amaningi ngaphansi kwezihlahla. Izindlu zangasese zomphakathi ziyatholakala eduzane nendawo indawo ingeyona, phakathi kwemigwaqo eminingana yeningi yedolobha. Ehlobo, lindela amakhonsathi ajwayelekile kuma-bandstand phakathi nosuku kuze kube ngamahora kusihlwa, abathengisi bokudla, nezinye izinto ezihehayo kokubili abadala nasezinganeni. Ngokuhle izivakashi, isiteshi esikhulu samabhasi sasedolobheni sitholakala endaweni eyodwa epaki. Vula ukuphuma kwelanga nsuku zonke ekushoneni kwelanga.
I-aquoleum yaseDemon's Hole, etholakala eTucker's Town, isavaliwe, ishiye iBermuda National Aquarium neZoo njengesizinda sokuphila semanzini eBermuda. Lindela ukubona izinhlobonhlobo zamanzi nezilwane zomhlaba ezibuyiselwa empilweni ngemuva kokutholakala usengozini osebeni lweBermuda. Le zoo / i-aquarium ihlukile ngoba izivakashi zingangena ezindaweni ezihlala izilwane ngenxa yemvelo encane yesikhungo.
Amadola aseMelika amukelwa yonke indawo eBermuda.
IBermuda inikezela ngama-ATM ezindaweni eziningana zabavakashi, kubandakanya isikhumulo sezindiza, iSt George, Somerset, neHamilton. Amabhange amaningi nawo anama-ATM. Amanye ama-ATM akhipha amadola aseMelika; lokhu kuzomakwa ngokusobala kusibonakaliso emshinini noma ngaphezulu komshini. Ngaphandle kwalokho, izokhipha amadola eBermuda.
Yize amakhemikhali e-MasterCard neVisa namakhadi wesikweletu amukelwa kaningi, kujwayelekile emahhotela amancane nasembhedeni nakwezikhathi sekhefu ukungazemukeli. Ngaphambi kokubhuka, hlola nehhotela noma umbhede nesidlo sasekuseni ukuze uqiniseke ukuthi ayawemukela amakhadi wesikweletu uma uhlela ukukhokha ngale ndlela. Yize izitolo eziningi zemukela amakhadi ukuze zihambele izivakashi, amahhotela amaningi nezindawo ezinkulu azisebenzi. Imali iyakhokhelwa ngokheshi.
Kuqinisekiswa okuhle kwezitolo eHamilton, ikakhulukazi kuFront Street. Indawo ingahlolwa kalula ngonyawo. IFront Street, ingenye yemigwaqo emikhulu yokuthenga, futhi ibheke ethekwini. Ukuthenga kungatholwa nedolobha elihamba kalula iSt George kanye naseDockyard, enendawo encane yezitolo. Izitolo ezincane zingatholakala kuso sonke isiqhingi ezinikeza ngempahla enhlobonhlobo.
Izitsha ezimbili ezihlukile ze-Bermudian yi-codfish enosawoti, ebilisiwe namazambane, isidlo sasekuseni sangeSonto, neHippin 'John, isidlo esilula selayisi ebilisiwe nophizi onamehlo amnyama. IShark hashi yenziwa, amakhekhe ezinhlanzi ayengokwesiko ngolwesihlanu, ama-hot bun bun e-Easter, nomdumbula noma ophaya ngoKhisimusi. Ngemakethe yabavakashi ephezulu, umzamo omkhulu usetshenzisiwe ngabapheki bamahhotela nezindawo zokudlela ekwakheni i-cuisine yase-Bermudian engabonakali kahle, yize lokhu kuvame ukuchaza ukuguqula ezinye izindlela zokudla, kusuka eWest Indian kuya eCalifornian, ukuhambisana nokulindelwe kokuvakasha ikhasimende Iningi loshicilelo lisebenzela imali ejwayelekile yeBritish Pub, yize inani lalezi zinto linciphile njengoba izakhiwo zilahlekelwe ukuthuthuka, noma izikhungo zakhiwa kabusha ukuqondisa imakethe yezivakashi. Ngenkathi ama-lobster nokunye ukudla kwasolwandle kuvame ukufakwa kwimenyu, cishe yonke into ingeniswa ivela e-US noma Canada. Uma ufuna izinhlanzi zasendaweni, cela noma ubheke oku- “kwasendaweni” kunokuphikisana nokuthi “okusha.”
Izindawo zokudlela zitholakala kuso sonke isiqhingi, ngokuhlaselwa okukhulu kakhulu kwedolobha laseHamilton nedolobha iSt George. Futhi, kunamahhotela kwamanye amahhotela nezindawo zokungcebeleka ezingadalulwa (noma cha) futhi ezinentengo.
QAPHELA: Ukuthathwa kwemali kufakiwe kumthethosivivinywa (i-15% noma i-17%) ngokuya ngendawo yokudlela, ngakho-ke hlola umthethosivivinywa wakho ukuze ugweme ukuvela kabili ngephutha.
Izitsha zasendaweni zifaka
I-Cassava pie. UFarina uyisisekelo esehlukile. Ngokwesiko kudliwa ngoKhisimusi, kepha kutholakala kakhulu ezimakethe zasendaweni unyaka wonke.
Bay amagilebhisi jelly. Amagilebhisi eBay ayethulwa njengekhefu lomoya. Noma, njengama cherries ama-Surinam nama-loquats, atholakala kulo lonke elaseBermuda, futhi athela izithelo ezidliwayo, asikho kulezi zitshalo ezitshalwa kwezolimo eBermuda, futhi izithelo zazo zivame ukudliwa emthini, ngokuyinhloko yizingane zesikole.
AmaBermuda Bananas amancane futhi amnandi kunabanye, avame ukudliwa ngeSonto ekuseni ngo-codfish namazambane.
Inhlanzi idliwa kabanzi ngesimo se-tuna, wahoo, ne-rockfish yasendaweni. Izinhlanzi zasendaweni ziyinto ejwayelekile kumamenyu wokudlela esiqhingini sonke.
I-Fish Chowder evuthwe nge-sherry pepper sauce ne-rum emnyama iyintandokazi esiqhingini sonke.
Shark Hash. Inyama eshisiwe yomhluzi exutshwe nezinongo futhi inikwa isinkwa
Pudding Omnandi Wamazambane. Kwenziwa ngamazambane amnandi, izinongo, nojusi wewolintshi omusha. Wakhonza njalo ngamaholide
I-Codfish Brunch. isidlo sasekuseni esithandwayo saseBermudian esakhiwa i-codfish esibiliswe ngamazambane kanye no-anyanisi weBermuda (isiNgisi), kanye nobhanana osikiwe waseBermudian. Lindela ukubona lesi sidlo esikhethekile ezindaweni zokudlela nakumbhede kanye namakhefu phakathi nempelasonto.
IBermuda ineziphuzo ezimbili ezidumile:
I-Rum Swizzle okuyi-cock cocktail eyenziwe nge-Demerera Rum (i-amber rum) futhi Jamaican I-ramu (i-rum emnyama) kanye ne-assortment yamajusi we-citrus. Kwesinye isikhathi i-brandy iyangezwa engxubevishini. Qaphela, iqine impela. Ngokusho kwe-lore yendawo, yaqanjwa ngeSwizzle Inn lapho kuthiwa yathuthukiswa.
I-Dark n 'Stormy iyi-highball ye-Gosling's Black Seal, inhlanganisela emnyama yezindondo zendawo, exutshwe neBeruda Stone Ginger Beer kaBritter.
Zombili iziphuzo zinoshukela ngokuqhathanisa.
Ulimi olusemthethweni isiNgisi. IsiPutukezi siwulimi lwesibili olukhulunywa kakhulu emhlabeni.
Kubhekwa njengokuziphatha okuhle lapho ubingelela othile, umsizi wesitolo noma uNdunankulu, ukuthi “sawubona”, “sawubona” noma “sawubona” futhi wenze okufanayo lapho ubashiya. Lokhu kusebenza ngisho nasezimweni lapho uyikhasimende, njengokuthi lapho ugibela ibhasi noma ungena esitolo. Kuthathwa njengokungenangqondo futhi kuyamangaza ukubuza umbuzo noma ukwenza isitatimende ngaphandle kokubabingelela. Zama ukugwema ukukhuluma ngepolitiki noma ngenkolo ngaphandle kokuthi umazi kahle umuntu.
Iningi lamaBermudians lihlala kahle uma kukhulunywa ngokusiza noma ukuphendula noma imiphi imibuzo isivakashi esingaba nayo. Vele umise umuntu emgwaqweni, noma ungene kunoma yisiphi isitolo abuze. Hlola iBermuda futhi ngeke uzisole.
Idolobha eliqophekile laseSt George naseziNhlanganisweni ezihlobene, iBermuda